> Resource > Memory Card > Tutorial ee Mac Memory Card Photo Recovery
Ma u suurto Me inuu ka soo kabsado tirtiray Memory Card Photo on Mac?
Qaaliga ah oo dhan, waxaan u baahan tahay inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka kaadhka xusuusta, oo ku yiil sawiro booqashadaydii Tokyo. Waxaa wax laga xumaado waxaan waqti badan oo aan raad raac iyaga on my Mac. Sidaas, qof walba oo i siin karaan xal u xusuusta kaarka sawirka kabashada this on arrinta Mac?
Photos kaadhka xusuusta laga yaabaa in sababta loo waayey shil ah ama si ula kac ah u tirtira, formatting card, musuqmaasuqa file ama sababo kale. Sidaas, waxa xalka ugu wanaagsan si ay u soo ceshano xasuusta sawir card on Mac? My jawaabta waa Wondershare Data Recovery for Mac . Waxaad hadda karaa download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac ah
Wondershare Data Recovery for Mac Siinayaa fudud, ammaan iyo samatabbixinta-free Mac kaadhka xusuusta kabashada sawir xal. On xaalad kasta oo keena idinkoo khasaaray sawir, Wondershare Data Recovery for Mac awood u yeelan doonaan in ay dib u helaan. Iyadoo version maxkamadda, waxaad si fudud u abuurtaan karaan barnaamijka si scan kaadhka xusuusta aad u sawiro laga badiyay. Haddaba ee soo kabsado sawir kaadhka xusuusta on Mac in 3 tallaabo. Haddii aad tahay Windows computer user, waxaad ka heli kartaa version Windows iyo akhriso hagahaan halkan: Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka kaadhka xusuusta kombuyuutarka Windows .
3 Talaabada inay Qabtaan Mac Memory Card Photo Recovery
Tallaabada 1 Dooro Recovery Mode inuu ka soo kabsado tirtiray Memory Card Photo on Mac
Ka dib markii ay ku rakibidda oo bilaabeyna Wondershare Data Recovery for Mac, aad arki doonaa interface ku bilaabatay ka dib markii la kala dooran karo: Khasaaray File bogsii, Recovery Barzakh, iyo ceeriin Recovery, iPhone Recovery ka Lugood iyo furmaya Recovery.
Halkan, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad dooro "lumay Recovery File" inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka kaadhka xusuusta on Mac.
Fiiro Gaar ah: Waa aasaasiga ah in kaadhka xusuusta aad la aqoonsan karo sida qalabka lagu kaydiyo aad Mac ah.
Tallaabada 2 Dooro Memory Card si Sawirka u Khasaaray Photos
Barnaamijka waxaa lagu ogaan doonaa iyo Liiska aad drives deegaanka Mac iyo aaladaha kaydinta dibadda. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah u kaadhka xusuusta iyo guji "Scan" ay soo baadhaan.
Fiiro gaar ah: Haddii photos yihiin laga badiyay sababta oo ah formatting card, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho.
Tallaabada 3 Ladnaansho Memory Card Photo on Mac
Marka scan ka baxayo, waxaad awoodi doontaa inaad si ay u eegis helay sawiro iyo kabsado iyaga sida aad rabto, kaliya dooro kuwa sawiro aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Mac.